, Kwasuka Hacks ukubuyekeza - Uphondo Of The Day
Uma ufuna amasu engcono ukuze abe ukusebenza okuqinile ibhizinisi, uzoba bayeza ngempela iminikelo ambalwa webinars ewebhu kanye Izibuyekezo mayelana kahle kanjani ukwenza kwabo.
Into engcono kakhulu ongayenza ngalesi ngokweqile zafinyelela imininingwane axazulule eyodwa uwedwa futhi asebenzise ulwazi njengoba okusemandleni wakho.
Iqiniso liwukuthi ukubuyekeza uphondo Hacks ngeke ukhulume mayelana amandla noma ukufinyelela okuqukethwe.
Udinga ukuzwa it wedwa.
Ungakwazi, Nokho, unake izingxenye elinemininingwane okuqukethwe yomnikelo main nendlela nezimiso zokuziphatha kuthiwa imikhuba ithunyelwa e-webinar.